Madaxweynaha Tanzania Oo Diiday In La Xidho Goobaha Lagu Cibaadeysto – somalilandtoday.com
Madaxweynaha Tanzania Oo Diiday In La Xidho Goobaha Lagu Cibaadeysto
Ingiriiska Oo Farriin U Diray Shirguddoonka Cusub Ee Wakiillada
“Guruuje Waxaan Leeyahay Siyaasadda Iyo Basaasnimadu..” Prof. Cabdi Cali
“KULMIYE Laftiisa Uun Baa Wada Tartamayay…” Siyaasi Cabdillaahi Cukuse
(SLT- Tanzania)-Madaxweynaha Tanzania John Magafuli ayaa cambaareyn xooggan kala kulmay hoggaamiyeyaasha mucaaradka, kaddib markii uu diiday in la xidho goobaha cibaadada, si loo xakameeyo Cudurka Coronavirus.
Inkastoo dowladda Tanzania ay qaaday tallaabooyinka lagaga hortagayo faafitaanka cudurka Coronavirus ayaa xidhay Iskuulada, karantiilka dadka ajaaniibta iyo mamnuucida munaasabadaha ay dadka isugu yimaadaan, balse dowladda ayaa diiday in la xidho Kaniisadaha.
John Magafuli ayaa sheegay in Fayraska uu yahay Shaydaan, sidaas darteed aanu ku kobci karin kaniisadaha sida uu hadalka u dhigay.
Hase ahaatee Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka Civic United Front Ibraahim Lipumba ayaa VOA u sheegay in haddii dadku sii wadaan isu imaatinka fagaaarayaasha dadka badan isugu yimaadaan uu khatar ka imaan karo.
Dalalka Adduunka ayaa gebi ahaanba joojiyay isu socodka duulimaadyada, isu imaanshaha fagaarayaasha, waxaana magaalooyin badan la geliyay bandow, si dadka guryahooda u joogaan, loogana hortago Coronavirus inuu faafo.
(SLT-Hargeysa)-Siyaasiy Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse oo ka mid ah Xisbiga Kulmiye ayaa sheegay in bulshadu fahmi...